XR Université de Goma - Spreading the message with street performance and dance
Monday, May 17, 2021 by Corinna
Abadanisi ababini benxibe iimpahla ezenziwe ngeebhotile zeplastiki ezenziwa esitalatweni bengqongwe ngabadlula ngendlela abanomdla. Bekunye namagcisa alapha ekhaya, amatshantliziyo e-Extinction Rebellion aphawule uSuku lwaManzi lweHlabathi eGoma, isixeko esikwimpuma yeDemocratic Republic of Congo.
Image Credit: XR Université de Goma, World Water Day Performance, March 22nd 2021
Bephethe iiplacards, bajikeleza isixeko baza bamisa ukuze badlale kwiindawo zikawonke-wonke. Ibhodi ibhalwe ukuba “Ukungcolisa amanzi kukuhlaba umhlaba”, igxeka ungcoliseko lweplastiki kunye nokungabikho kokufikelela kumanzi okusela acocekileyo. IGoma, isixeko esinabantu abasi-1.1 sesigidi sixhomekeke kwiChibi iKivu, elinye lamaChibi Amakhulu aseAfrika, njengomthombo walo kuphela wamanzi okusela. Ichibi alisindiswanga ziingxaki such as urban waste, agrochemicals and sewage.
Isahluko se-XR sikaGoma sasekwa ekuqaleni kuka-2020 liqela labafundi baseyunivesithi abasebenzisa umdaniso kunye nezenzo ezisekelwe kwintsebenzo yoluntu ukudibanisa noluntu. U-Antoine, ilungu leqela, wathi ukusebenza kunceda ukutsalela ingqalelo kwisizathu kunye nokubhenela kuxanduva lomntu wonke, kungekhona nje urhulumente. Ikwayeyona ndlela ikhuselekileyo nengenabundlobongela yokuba baziveze kwaye badlulise umyalezo.
Amatshantliziyo oyika ukhuseleko lwawo
Ukhuseleko yeyona nto iphambili kwingingqi edlakazwe yimfazwe yamakhaya enenkqubo yokhuseleko ebuthathaka. Besoyikela ukukhuseleka ngokwasemzimbeni, ekuqaleni baseka iqela emfihlakalweni, kodwa kamva bafumana imvume eyunivesithi. Okwangoku, eli qela liqulunqwe ngamalungu angama-25, phakathi kwabo kukho abafazi ababini, uninzi lwabo "abasuka kwiintsapho ezithobekileyo okanye ezihluphekileyo".
Abazali badla ngokuba kunye nabo kwityala labo, kodwa bahlala bezama ukubalela ukuba bathathe inxaxheba kwizenzo kuba bekubona kuyingozi kakhulu kwimeko yelizwe. UAntoine wachaza ukuba “Imiboniso emininzi, enoxolo okanye engekhoyo, iyacinezelwa yaye maxa wambi iimbumbulu zokwenene.” Uninzi lwabahlobo babo luyabaxhasa, kodwa bangabi nabuganga bokuthatha inxaxheba kwizenzo.
Image Credit: XR Université de Goma, Demonstration “Oil, no thank you”, March 2nd 2021
Ingozi ayiveli nje kwabasemagunyeni nangona kunjalo. Ngokuchasene nezicwangciso zokutsalwa kweoli kulo mmandla, bazibeka esichengeni sokucaphuka iinkampani ezinamandla zamazwe ngamazwe. IVirunga yeyona paki yelizwe indala eAfrika kunye neNdawo yeLifa leMveli yeHlabathi kufutshane neGoma kwaye yenye yezona ngingqi zihlukeneyo zebhayoloji emhlabeni. Le paki isaqhubeka nokwenza izihloko amagosa epaki ahlaselwe aze abulawe ngamaqela omkhosi axhobileyo ahlala kwaye asinda kule paki ngokuzingela nokugawula iinkuni. .
Kukho imithetho yelizwe neyamazwe ngamazwe evala imisebenzi enjalo epakini kodwa urhulumente uyaqhubeka enika iilayisensi zokuphonononga ioyile kwiinkampani ukuba zigrumbe ioli epakini. Ngaphambili, inkampani yeoli yaseBritane i-SOCO yaziwa kakubi ngokunyoba kunye nokugrogrisa abantu balapha kunye negalelo ekushenxiseni uzinzo kulo mmandla wonke. Ngo-2014 iSOCO yavuma ukurhoxa phantsi ukunyuka koxinzelelo lwamazwe ngamazwe nolwengingqi.
Enye inkampani 'Itotali' esekelwe eFransi, ihoxise kwindawo esecaleni kwepaki e-DRC ngo-2018. Nangona kunjalo isongelo sihlala njengoko urhulumente usavulekele ingcamango kwaye i-Total isasebenza kummandla obanzi. Inkampani ngoku yakha omkhulu umbhobho weoyile kumazwe asebumelwaneni iUganda neTanzania enethuba lokuvuselela iphupha leoyile yeVirunga yaseDRC.
I-XR Goma ijoyina umlo oqhubekayo wokulwa nokuhlolwa kwe-oyile kwingingqi
Kunyaka ophelileyo i-XR Université de Goma yazibandakanya kumlo ochasene nokuphononongwa kwe-oyile kwiVirunga National Park ngentsebenzo ebonisa ubuhle nokutshatyalaliswa kwamahlathi. Abaxhamli bazisa abantu kwisitrato malunga nemiphumo emibi yokugaya ioli ngesandisi-lizwi kwaye baphethe iiplacards ezidibanisa ishishini leoli nobundlobongela.
Image Credit: XR Université de Goma, performative action against oil exploration in Virunga National Park, October 2nd 2020
Phambi kwesenzo ngasinye, bazisa abasemagunyeni ngezicwangciso zabo kwaye bababize ukuba baqinisekise ukhuseleko lwabo. Ukuza kuthi ga ngoku, zonke izenzo zabo zahlala ziseluxolweni.
Ngo-2021 banethemba lokwandisa iqela labo ngaphaya kweyunivesiti yabo kwaye babe yi-XR Goma. Bakwaceba ukwenza amaqela asekuhlaleni e-XR kwiilali ezijikeleze iVirunga National Park ukuququzelela imfundo yokusingqongileyo. Ngaphandle koko, bazakuhlala begxeka ukuziphatha kakubi kunye nokungcolisa abantu bezizwe ngezizwe kulo mmandla.
Balandele ku Twitter, Facebook kunye Instagram